Rubric: mhuka nemiti
African Achatina snails - chimwe chezvikwata zvakakura munyika yose. Kureba kwemisungo iyi kunogona kusvika kusvika ku 30 cm. Kana chizvarwa ...
Makati, imbwa uye maduku maduku mhuka dzinofarira zvipfuwo. Vanoshandiswa mudzimba uye dzimba, pasinei nemafashoni emafashoni. Asi fashoni inowanikwa pane Akhatin nemamwe mhuka dzemhuka ...
Achatina sora - mhuka inoshanda kubva kuAfrica - kutarisira, kubereka, kugadzirisa
Kana iwe uchifanira kupedza nguva yakawanda kubasa, asi iwe unoda kuva nechimwe chipfuwo pamusha. Kana zvakagadzirwa nembwa "zvisingagamuchirwi zvigadzirwa", uye marudzi ose emakonzo anoita se "banal." Paunenge uchida ...
Ndekupi inobata ruzivo kukura muRussia? Uye iye zvechokwadi tinokura? Kune zvakawanda zvavo muAustralia. Vanokura imomo. Uye pano kana pane, ipapo mune rimwe bindu re botanical, rinofanira kuva ...
Zvinokwanisika here kuchengeta dzimba dzemakati neshiri panguva imwe chete? Kwemakore mazhinji taive ne canari muvhara nekati. Haana kumutambudza, uye kazhinji akangogara pasi ...
Ndeipi mhando yezvipembenene kunze kwejongwe inogona KUTANGA kuenda kune imwe muimba muimba? Kune mahombe madema. Zvinotaridzika sezvisikwa zvipenyu, zvitsvuku uye zvishoma. Kusiyana neyaiyo inowanzo tsvuku uye ...
Fenech ndiani? Ichi mhuka yemhuka inogara musango. Mhuka inoshamisa iyo inogona kurarama mukupisa, uye kunyange kuvhima. Nzeve dzakakura ndedzimwe mhando dzavanowana, kutora nhanho diki diki dzekudya kwemangwana ...
Sei mushwa chena wainzi chena? Boletus mushwa unonzi wakachena weruvara rwechiedza kunyangwe apedza kuoma. Nzvimbo yepazasi yekapu yemuti inova ruvara, uye kumusoro kune brown. White chena ndimambo ...
Nei pasiworm inoputika? Izvo zvinyorwa zvinodiwa kuti nyika isvike iyo iyo ganda reganda iri kwatiri, ndiko kudzivirirwa kwomuviri kunopesana nekunze kwezvakatipoteredza, bristles yehonye zvakakwana ...
Nzira yekutumidza sei pakaPersia? Paunosarudza zita, zvakakosha kusarudza dzimwe sangano dzinogona kukusunga semuridzi nemhuka yako, kana kuti kupfuurira kubva pane unhu hunokosha hwekupa rimwe zita kana rimwe zita, ...
Ndezvipi zvikamu zvinodiwa kumasero ezvisikwa zvese zvipenyu? Sezvandinorangarira kubva kuhurongwa hwechikoro, sero racho rine nucleus. Nechepakati, ipapo, chine DNA. Kamba inodaidzwa kuti membrane. Iyo cytoplasm - ...
Sei mombe ichida nyanga? Ini ndinofunga kuti nyanga dzenzombe dzakapihwa nechisikirwo munzvimbo yekutanga kuti vazvidzivirire ivo pamwe nevadiwa vavo kubva panjodzi nemuvengi, uye chechipiri, kushanduka kwemombe dzinogona kupa nyanga ...
Sei kate inobata mutsara mumugwagwa uye ichiuyisa kumba? Mafungiro, anozviisa kuna tenzi wake. Uyo ndiye munhu anomudya. Izvi zvinowanzoitika, kuratidzwa kwekuzvipira kune imwe nzvimbo. Saka ...
Nei peari chiratidzo chehupenyu hurefu? Zvichida izvi zvinoreva tsika yeChinese (mapeya miti yakareba-refu, anokura kusvika kumakore 100), mune dzimwe nyika ine zvakasiyana zvinoreva. MuGreek yekare, peari ...
Ko mbatya inogona kurwisa murume nembwa uye nei? Fox yakanga yakanganisa, yakangoerekana isina kuwana hutachiona. Hapana imwe imwe shanduro, mweya wakaipa haugoni kupinda muhove ...
Sei imbwa isingagoni kutapira? Kufanana nevanhu, kutapira kunokanganisa mazino embwa. Shuga inobvisa calcium kubva kumazino, iyo inova isina kusimba, uye ipapo mabharia anonzi putrefactive anotanga basa ravo, ...
Chii chinoumbwa mumakwenzi munzvimbo yeruva? Nomuzvarirwo, iyo fetal ovary, kana yakabudirira fetereza yakaitika. Ini ndinofunga idzi imbeu, (kana izvi ari maruva, semuenzaniso), mabhokisi ane mhodzi anogona kuzokura zvinoyera ...
Nzira yekudzidzisa sei kati kuti iburuke seri kwechimbudzi? Ndinoda chaizvo kati yangu kuenda kuchimbudzi uye kushambidza pachayo shure kwayo, saka handifaniri kuchenesa tereyi, ...
Sei makate achiunza mapani mumba? Makate anouya kwete kungobata mice uye dzimwe huku muimba, asiwo zvitunha zvemakumbo, kazhinji hafu inodyiwa. Chiitiko ichi chinonyangadza, asi kati ...
Nzira yekuchenesa sei pasi nevhiniga, kuitira kuti imbwa isasvibiswa?
Nzira yekuchenesa sei pasi nevhiniga, kuitira kuti imbwa isasvibiswa? Zviri nani neammonia, kunhuwa kunobva kwairi. Ndinofunga kuti vhiniga haigone kunhuhwirira zvakanyanya. Vhiniga haigoni kudonha imbwa kuti iite!
Mibvunzo ye72 mu database yakagadzirwa mu 0,577 masekondi.